Dowlada Federalka oo sheegtay inay baaritaan ku sameyneyso weerarkii madaafiicda ee Xalane - Jowhar somali news leader
Home NEWS Dowlada Federalka oo sheegtay inay baaritaan ku sameyneyso weerarkii madaafiicda ee Xalane
Dowlada Federalka oo sheegtay inay baaritaan ku sameyneyso weerarkii madaafiicda ee Xalane
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay weerarkii hoobiyayaasha lagu bartilmaameedsaday xarunta shaqaalaha gargaarka bani’aadamnimo Xalane ee Muqdisho.
War ka soo baxay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay baaritaan dhammeystiran ku sameynaysa weerarkan hoobiyayaasha ah iyo duruufaha amni ee ku xeeran weerarkan.
Qoraal ay dowladu ku cambaareysay weerarka madaafiicda ayaa u qornaa sidan;
“Weerarkan fuleynimada ah waa isku day la doonayo in lagu wiiqo taageerada muuqata ee bulshada caalamka iyo dadaalkooda ku aaddan dhismaha nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.”
“Weerarkan hoobiyeyaasha ah ayaa cadeynaya iskudayada taagta daran ee argagixisada oo miciin biday in ay beegsadaan samafaleyaasha u yimid dalka si ay u caawiyaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinacyada gargaarka binu aadantinimo, kaddib markii ay u midoobeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii ay dalka uga sifeyn lahaayeen argagaxisadaas.”ayaa lagu yiri qoraalka.
“Qorsheyaasha mideysan ee geesinimada leh ee shacabka iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku wajahayaan argagixisada laguma weecin doono ficilladan fuleynimada ah ee ay soo maleegeen argagixisadu, sidoo kale kama niyad jabinayaan walaalaha iyo saaxiibada Soomaaliya inay sii wadaan taageerada iyo iskaashiga ay la leeyihiin dalkeenna.”
“Waxaan rabnaa inaan u xaqiijino bulshada caalamka iyo shaqaalaha samafalka in dowlada ay sii wadi doonto la shaqeynta daneeyayaasha ammaanka si loo xaqiijiyo badqabka samafaleyaasha caalamiga ah.”ayaa lagu soo gabagabeeyay warka ka soo baxay dowlada federalka.
Previous articleErgeyga Qaramada Midoobay oo cambaareeyay Weerarkii Madaafiicda Hoobiyaha ee ka Xalane
Next articleThe governor of the US state of Arkansas adopts laws banning almost all abortions